Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Brezila » Nahatratra 100 ny olona natahotra ho voafandrika tamin'ny fihotsahan'ny fotaka Kanadiana
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Nahatratra 100 ny olona natahotra ho voafandrika tamin'ny fihotsahan'ny tany Kanadiana.
Nilaza ny tompon'andraikitry ny mpamonjy voina fa manodidina ny 50 ireo fiara tafaporitsaka teo anelanelan'ny tanimbary roa teo amin'ny lalam-pirenena, izay misy olona roa na telo eo ho eo.
Ny fihotsahan'ny tany tany Kolombia Britanika any Kanada dia nanaraka ny rotsak'orana maherin'ny iray andro.
Mbola niezaka nanao tombana ny fahavoazana vokatry ny fihotsahan’ny tany ny mpiasan’ny fikatsahana sy ny mpamonjy voina ny alatsinainy teo.
Mbola tsy fantatry ny tompon’andraikitra raha mbola misy olona sy fiara hafa tsy hita popoka.
Nisy fihotsahan'ny tany be dia be namely ny lalambe faha-7 tany akaikin'ny tanàna kelin'i Agassiz any atsimon'i Kanada British Columbia faritany, taorian'ny rotsak'orana nihoatra ny iray andro.
Olona 100 farafahakeliny no natahorana ho voafandrika mandritra ny alina eo anelanelan'ny potipoti-javatra amin'ny lalambe kanadiana taorian'ny orana tsy an-kiato niteraka tondra-drano sy fihotsahan'ny fotaka omaly. Natomboka ny asa fanavotana rehefa maraina ny andro.
Araka ny filazan'ny tompon'andraikitra mpamonjy voina avy any Kanada, dia manodidina ny 50 ireo fiara voafandrika teo anelanelan'ny tanimbary roa teo amin'ny lalambe. British Columbia, izay misy olona roa na telo eo ho eo avy.
Mbola niezaka nanombantombana ny fahavoazana vokatry ny fihotsahan'ny tany ny mpiasan'ny fikatsahana sy mpamonjy voina tamin'ny alatsinainy – niaraka tamin'ny faritany Heavy Urban Search and Rescue (HUSAR) Nambarany fa tsy afaka nijery tanteraka ny zava-misy nandritra ny alina.
"Ny manasarotra an'ity toe-javatra ity dia manana slide roa izahay amin'ny lalam-pirenena faha-7 ary misy olona voafandrika ao anatin'ny potipoti-javatra…
Nampiany ihany koa fa efa nahatratra 12 farafahakeliny ny sampana mpamono afo tao an-tanàna izay voafandrika tao anaty fiarany, raha nisy olona roa hafa avotra tany an-toeran-kafa.
Raha nanamarika fa tsy mbola azon'ny manampahefana antoka raha misy olona sy fiara hafa tsy hita popoka, dia nilaza i Boone fa "mbola jamba kely ny manam-pahefana amin'ny sehatry ny olana." Ankoatra ny tsy fahampian'ny hazavana, ny fitoniana amin'ny tany sy ny olana manodidina ny tariby herinaratra dia manasarotra ihany koa ny asa famonjena. Ny fanombanana fanampiny momba ny "toerana fidirana tsara indrindra" ho an'ny ekipa dia tsy maintsy miandry mandra-pahazavan'ny andro, hoy izy.
Araka ny tatitra an-telefaonina sasany avy amin’ireo mpamily, dia “tena nandre ny feon’anjombona sy nikiakiaka niantso vonjy” izy ireo, ka nilaza fa “mety ho 200 eo ho eo ny fiara niampita, miandry karazana fanavaozana.”